Otu esi etinye MariaDB 10.7 na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye MariaDB 10.7 na Ubuntu 20.04
Tọzdee, Nọvemba 18, 2021 Wednesday, November 17, 2021 by Jọshụa James
Bubata MariaDB 10.7 GPG Key & Repository
Nhọrọ 1 - Bubata MariaDB 10.7 site na iji Mirror Server
Nhọrọ 2 - Bubata MariaDB 10.7 Repo site na iji Official Bash Script
MariaDB 10.7 na Ubuntu
Lelee ọnọdụ ọrụ MariaDB 10.7
Chekwaa MariaDB 10.7 na edemede nchekwa
Banye na MariaDB 10.7 Ihe atụ
Otu esi ewepu (wepụ) MariaDB 10.7
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye MariaDB 10.7 na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.
Nzọụkwụ mbụ bụ ịwụnye ihe ndabere achọrọ maka nrụnye.
Iji mee nke a, jiri iwu a na njedebe gị:
Iji wụnye MariaDB nke ọma, ị ga-ebubata ebe nchekwa MariaDB 10.7 site na MariaDB ma ọ bụ ọtụtụ enyo dị. Nkuzi a ga-egosi nhọrọ abụọ ịhọrọ.
Nhọrọ mbụ ibubata igodo na ebe nchekwa GPG bụ iji enyo. Ị nwere ike ịtọ ọnụọgụ ọ bụla nke ebe enyo site na ịmegharị iwu ihe atụ dị n'okpuru. Naanị mwepu bụ na ha nwere ike ịbụ ụbọchị ole na ole ruo otu izu n'azụ na mmelite ntọhapụ ọ bụla, dịka ọmụmaatụ, 10.6.4 ruo 10.6.5.
Mbụ, bubata igodo GPG site na iji iwu a:
Na-esote, gbaa iwu na ọdụ gị ka ịbubata ebe nchekwa MariaDB 10.7:
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] https://mariadb.mirror.liquidtelecom.com/repo/10.7/ubuntu focal main'
Rịba ama, enwere ike ịchọta enyo nbudata na peeji a si MariaDB ntọala ka ịchọta ebe dị gị nso maka ebe nchekwa.
Ugbu a igodo na ebe nchekwa ebubatara melite ndepụta njikwa ngwugwu dabara adaba iji gosipụta mgbakwunye ọhụrụ ahụ.
Nhọrọ nke abụọ na ikekwe masịrị ya bụ iji script bash gọọmentị n'ihi na mmelite ọ bụla ga-adị ngwa ngwa ozugbo ebuga ya na ebe nchekwa gọọmentị. Ndị ọrụ na-anọghị nso sava ha nwere ike chere nsogbu ụfọdụ ihu, mana nke a agaghị abụ nsogbu maka ọtụtụ.
N'ọnụ ọnụ gị, jiri iwu a.
Rịba ama, ọ bụrụ na iwu ahụ ada ada, o yikarịrị, ị chefuru ịwụnye ngwugwu curl.
Rịba ama, maxscale na ngwá ọrụ a mafere. Ị nwere ike wepu ọkọlọtọ ndị a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye mgbakwunye ndị a, agbanyeghị, buru n'uche na ọtụtụ ndị ọrụ anaghị achọ ha, enwere ike ịwụpụ ha n'enweghị nsogbu.
Nke a na-egosi na ebubatala ebe nchekwa ahụ nke ọma. Na-esote, megharịa ndepụta nchekwa APT gị.
Iji wụnye MariaDB, ị ga-achọ ịwụnye onye ahịa na ngwugwu ihe nkesa. Enwere ike ime nke a dị ka ndị a:
Pịnye Y wee pịa Tinye igodo ịga n'ihu na nwụnye.
Kwado nrụnye nke MariaDB site na ịlele ụdị ma wuo:
Ugbu a ị tinyela MariaDB, ị nwere ike nyochaa ọnọdụ nke ngwanrọ nchekwa data site na iji usoro systemctl na-esonụ:
Site na ndabara, ị ga-ahụ ọkwa MariaDB ka ọ rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, malite MariaDB, jiri iwu a:
Iji kwụsị MariaDB:
Iji mee ka MariaDB nwee ike na mmalite sistemụ:
Iji gbanyụọ MariaDB na mmalite sistemụ:
Ka ịmalitegharịa ọrụ MariaDB:
Maka ndị ọhụrụ na MySQL, syntax iwu niile ga-ejedebe na ";"
sudo apt autoremove mariadb-server mariadb-client --purge
Pịnye Y wee pịa Tinye igodo ka ịga n'ihu na iwepụ ya.
Na-esote, wepụ ebe nchekwa ndị agbakwunyere maka iwepụ kpamkpam. Ị nwere ike ime nke a ma ọ bụrụ na ị na-atụgharị na 10.6 ma ọ bụ isi iyi ọzọ.
Nke mbụ, ọ bụrụ na ị wụnye MariaDB 10.7 site na iji usoro mirror, jiri iwu na-esonụ – ọkọlọtọ mwepụ ugbu a agbakwunyere.
sudo add-apt-repository --remove 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] https://mariadb.mirror.liquidtelecom.com/repo/10.7/ubuntu focal main'
Iji wepu ebe nchekwa script bash, jiri iwu a.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye ụdị MariaDB 10.7 kachasị ọhụrụ na ntọhapụ kwụsiri ike ọhụrụ Ubuntu 20.04.
N'ozuzu, ọ ga-enyere aka ma ọ bụrụ na ị kwalite site na ochie anụ ụlọ 10.5 dị ka ọ mara mma seasoned ugbu a tụnyere 10.6 ma ọ bụrụ na ị na-adịghị na-akwaga 10.7 dị nnọọ ka. Enwere uru dị ukwuu na arụmọrụ yana nkwalite. Ọ bụrụ na ị na-eme nkwalite, jide n'aka na ị na-akwado nchekwa data gị mgbe niile tupu ime ya iji zere ọtụtụ awa mgbu na iwe iwe na ihe ọ bụla metụtara nchekwa data nchekwa ma ọ bụ nkwalite.
Categories Ubuntu Tags MariaDB, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Otu esi etinye PHP 8.1 na Fedora 35
Otu esi etinye MariaDB 10.7 na Debian 11 Bullseye
Tuzdee, Nọvemba 23, 2021 2:19 nke ụtụtụ
Mara ezigbo mma nkuzi. Mgbe ụfọdụ, m na-echefu gbasara apt-repositories bc M na-ejikarị arch. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị depụta ụzọ nwụnye dị iche iche, ịkwesịrị ịgbakwunye ntụzịaka maka otu esi achịkọta na wụnye site na isi mmalite.
Tuzdee, Nọvemba 23, 2021 6:24 nke ụtụtụ
Daalụ maka nzaghachi, m ga-eleba anya n'ịgbakwụnye usoro nchịkọta na mmelite n'ọdịnihu. 🙂